Xeerarka Marijuana Medical Kentucky - marijuana caafimaad oo ku taal Kentucky
Ruqsadaha Xashiishadda Caafimaadka ee Kentucky
Shuruucda Xashiishadda Caafimaadka ee Kentucky
Ruqsadaha Xashiishadda Caafimaadka ee Kentucky waxaa suuragal ah inay soo socdaan 2020! Markii ugu horreysay abid - Kentucky ayaa u codeeyey una gudbey Sharci-dejinta Caafimaadka Cannabis! Shuruucda Xashiishadda Caafimaadka ee Kentucky ayaa laga yaabaa inay dhakhso isu beddesho maxaa yeelay goleheeda sharci-dejinta ee gobolku waxay u codeeyeen 65-30 inay sharciyeeyaan xashiishadda caafimaad ee dadka Kentucky. Waxay dhowaan noqoneysaa sharci waxayna u oggolaaneysaa bukaanka inay marin u helaan daawada xashiishadda sharciga ah iyo in dadka kale looga fogaado qabashada aan loo baahneyn ee bulshada ka mamnuucaysa inay sii wadaan.
Baro dhammaan noocyada shatiyada marijuanaada caafimaad ee soo socda ee laga heli karo Kentucky ee HB 136 Hoos!
Ilaa iyo hada majirto wax xaqiiq ah, laakiin guriga Kentucky wuxuu ansaxiyay sharciga sharci dajinta ee marijuana - taas oo magaceeda u badashay cannabis iyo waxyaabo kale. Shuruucda Xashiishadda Caafimaadka ee Kentucky ayaa isbeddelaya, taas oo macnaheedu yahay in Kentucky ay dhowaan ku biiri karto gobollada sharciyeynta cannabis ee bukaannadeeda caafimaad! Goor dhaw, malaha waad heli kartaa a laysanka si aad ugu shaqeyso ganacsigaaga xashiishadda caafimaadka ee Kentucky.
Soo wac wax ku saabsan Codsiga Shatiga Xashiishka ee Caafimaadka Kentucky
Raadinta Kentucky Macluumaadka Dhismaha - Halkan Riix Halkan.
Kentucky HB 136:Abuur waxyaabo cusub oo cusub Shuruucda Xashiishadda Caafimaadka ee Kentucky tqeex ereyada; in laga dhaafo barnaamijka xashiishadda dawooyinka ee qodobbada jira ee sharciga Kentucky oo lid ku ah; inaad u baahatid Waaxda Khamriga iyo Xakamaynta Cannabis si loo hirgaliyo loona habeeyo barnaamijka marijuanaada dawada ee Kentucky; in la aasaaso Qaybta Daaweynta Xashiishka ee Waaxda Khamriga iyo Xakamaynta Cannabis; in la sameeyo xayiraad ku saabsan haysashada marijuanaada dawada adoo u qalmay bukaanka, booqda bukaannada, iyo daryeel bixiyayaal loo qoondeeyey; in la sameeyo ilaalinno gaar ah oo loogu talagalay kuwa sita; in la dhiso ilaalin xirfadeed oo xirfadleyda; in la bixiyo i u oggolaanshaha xirfadleyaasha guddiyada shatiga ee gobolka si ay u soo saaraan caddeyn qoraal ah oo loogu talagalay isticmaalka marijuanaada daawada; in la dhiso ilaalin xirfadeed oo loogu talagalay qareennada; in la mamnuuco haysashada iyo adeegsiga marijuanaada dawada ee saaran baska, salka ku haysa iskuul kasta ama dugsi hoose ama dugsi sare, xarun edbin, Sharci dejinta Kentucky Medical Cannabis, hanti kasta oo ay leedahay dowlada federaalka, ama intaad wadato gaari. in la mamnuuco sigaar cabidda marijuanaada daawada; in loo oggolaado loo-shaqeeyaha inuu xaddido haysashada iyo isticmaalka marijuanaada daawada ee shaqaale;
Sharciga Caafimaadka Marijuana ee Kentucky
Sharciga cusub ee xashiishka mariinka ee Kentucky wuxuu u baahan doonaa waaxda inay hirgaliso oo ay ku shaqeyso barnaamijka kaararka aqoonsiga;
in la dhiso shuruudaha kaararka aqoonsiga; in la dhiso ajuurada kaararka aqoonsiga; looga baahan yahay waaxda inay ku shaqeyso nidaamka risiidhaynta rukhsad kumeelgaarka ah;
in la dhiso shuruudaha dalabka ee kaarka aqoonsiga;
in la sameeyo markii ay waaxdu diidi karto arjiga kaarka aqoonsiga; in la dejiyo mas'uuliyado gaar ah ee dadka sita; in la ogaado marka kaarka aqoonsiga la burin karo;
in la dhiso qaybaha shati-siinta ganacsiga kala duwan ee xashiishadda;
in la aasaaso ruxinta ruqsadaha ganacsiga xashiishadda; si loogu baahan yahay macluumaad gaar ah in lagu daro arjiga loogu talagalay laysanka ganacsiga xashiishadda cannabis;
in la aasaaso marka waaxda diidi karto arjiga loogu talagalay shatiyada ganacsiga xashiishadda Kentucky Medical Cannabis;
in laga mamnuuco xirfadle inuu xubin ka noqdo guddiga ama sarkaalka maamulaha ganacsiga xashiishadda; in la mamnuuco wada-lahaanshaha qaybo ka mid ah ganacsiyada xashiishadda; iyo
in la dejiyo xeerar iibka maxalliga ah.
LA XIDHIIDH BADAN: Sida loo Furiyo Khilaafka Cannabis
Marabtaa inaad furto Ganacsi Xashiishad
Kentucky waxay sharciyeyn kartaa marijuana caafimaad
Shuruucda Xashiishadda Caafimaadka ee Kentucky - Toddobaadkii hore, guddi ka tirsan aqalka gobolka ee Kentucky ayaa soo saaray sharci lagu sharciyeeyo marijuanaada caafimaadka, HB 136, wuxuu leeyahay taageero muhiim ah gobolka, wuxuuna u taagan yahay fursad wanaagsan oo lagu noqdo sharciga. Nooca uu dhowaan ka gudbay guddiga Goluhu wuxuu taagan yahay Bogagga 116,. Waxaa la yaab leh, tani waxay ka gaaban tahay Xeerka 'Cannabis Regulation' iyo Sharciga Canshuuraha ee Illinois, kaasoo soo galay qiyaastii 600 oo bog.
HB 136 waxay abuurtaa qorshe shati siinta shatiga "Ganacsiga xashiishadda" Hay'adaha, iyadoo la tixraacayo isbeddelada hadda jira ee gobollada tilmaamaya "xashiishadda" halkii laga isticmaali lahaa "marijuana." Hindise-sharciyeedku wuxuu ka tagayaa faahfaahin badan oo shati-siinta ah ee loogu talagalay xeerarka maamul ee mustaqbalka, malaha waxay la mid tahay ilaa 200 oo bog oo ah qawaaniinta 'xaaladaha degdegga ah' ee ruqsad-siinta xashiishadda ee Illinois.
Nidaamka shatiga ee dhameystiran wuxuu abuuraa shan nooc oo shatiyada ganacsiga xashiishadda iyadoo la raacayo shuruucda cusub ee Xannaanada Caafimaadka ee Kentucky, kuwaas oo ku xiran ajuuro iyo shuruudo kala duwan. Hoosta, waxaan ku sahamineynaa qaar ka mid ah shuruudaha safka sare ee shatiyada ganacsiga cannabis kaladuwan.
KENTUCKY CAAFIMAAD MARIJUANA SHARCIGA QALABKA & PDF (HB 136)
LIISKA LACAG-SAMEYNTA KENTUCKY MARIJUANA
Sharciga ayaa qeexaya “Beeraley” sida soo socota:
“Koriyaha” waxaa loola jeedaa hay'ad shatiyeysan oo hoos timaada cutubkan kaas oo beero, goosanaya, oo u keenaya wax warshad ceeriin ah beero kale, qaybis, soo-saare, soo-saare, ama xarun u hoggaansan ammaan;
Beeraleyda ayaa aasaasiyan ku xaddidan koritaanka alaabta ceeriin. Qaybta 21aad waxay xaddideysaa howlahooda sida soo socota:
Qaadashada, haysashada, abuurista, beero, korinta, goynta, goynta, ama keydinta abuurka geedaha cannabis, geedo, geedo, ama walxaha dhirta ceeriin;
Bixinta, rarida, wareejinta, keenida, ama iibinta sheyga ceeriin ceeriin ama sahay la xariirta ganacsiyada kale ee shati shati ee gobolkaan; ama
Iibinta abuurka cannabis ama geedo udhaw hay'ado la mid ah oo ruqsad u haysta inay ku beeraan xashiishadda gobolkaan ama maamul kasta oo kale
Beeraleydu waa hay'adaha keliya ee ruqsad haysta oo leh “tiers” kala duwan, kuwaas oo saameeya qiimaha shatiga. Tani waa sida rukhsad u siinta cannabis ee gobollada kale ee sharciga ah. Waxaa jira Tier I, Tier II, Tier II, iyo beeraleyda 'Tier IV', oo ku saleysan cabirka dhismahooda beerashada:
Beer daaqaya - 2,500 cagood oo laba jibaaran ama ka yar;
Tier - 10,000 cagood oo laba jibaaran ama ka yar;
Tier III- 25,000 cagood laba jibaaran ama ka yar;
Tier IV- 50,000 cagood laba jibaaran ama ka yar.
Gobolku waa inuu oggolaadaa ugu yaraan 15 ruqsadaha Beeraleyda hal sano gudahooda kadib markuu biilku dhaqan galo.
Ugu dambeyntiina, beeraleyda (iyo sidoo kale soosaarayaasha iyo baarayaasha) waa ku waajib halis ah cashuuraha. Qaybta 33 ayaa soo rogtay cashuur dhaaf xad dhaaf ah 12% rasiidhada guud nin beeraley ah.
KENTUCKY CANNABIS XUQUUQDA Khilaafaadka
Sharciga ayaa qeexaya “qayb baahin” sida soo socota:
“Dispensary” waxaa loola jeedaa hay'ad shatiyeysan oo hoos timaada cutubkan kaas oo helaya, haysta, keenaya, wareejinaya, wareejinaya, iibinaya, keenaya, ama dawaynaysa xashiishad 16 cannabis ah oo la siinayo kaar-wadeyaasha;
Ruqsad u siinta kaadhadhka ayaa ka yara cad cad marka loo eego ruqsad siinta beeralayda. Sharcigu wuxuu runtii u baahan yahay in alaabada ay weheliso farmashiistayaasha. Qeybta 22aad waxay bixinaysaa:
Kalkaaliye caafimaad ayaa looga baahan yahay inuu sameeyo oo uu ilaaliyo heshiis 10 ah oo iskaashi ah, sida lagu sharxay Qaybta 10aad ee Sharcigaan, oo farmashiistaha uu u oggol yahay 11 ee Golaha Maamulka ee Kentucky inuu la galo heshiis iskaashi oo lala galayo 12 qaybsi dawladeed.
Gobolku waa inuu oggolaadaa ugu yaraan 25 rukhsad bixin ah muddo sanad gudihiis ah biilku dhaqan galey. Sharciga ayaa sidoo kale u baahan in ugu yaraan hal goob loo oggolaado mid kasta oo ka mid ah “degmooyinka horumarka” ee la aasaasay. Muhiimad ahaan, waa in juquraafi ahaan loo kala firdhiyaa si loo daboolo gobolka.
Nasiib wanaagse, kala-baxayaashu kuma xirna canshuur dhaafka weyn ee beeraha, soosaarayaasha, iyo soosaarayaasha.
XUQUUQDA KENTUCKY CANNABIS
Sharciga ayaa qeexaya “processor” sida soo socota:
“Processor” macnaheedu waa hay'ad ruqsad u siisay cutubkan oo ka heley wax warshad ceeriin ah soosaaraha si loo diyaariyo, loo gooyo, loo maareeyo, loo qaso, ama wax looga beddelo walxaha warshadda ceyriinka ah, iyo alaabada xirmada ay ka kooban tahay ama laga soo qaatay sheyga ceyriinka ceyriinka. iibka ah rukhsad shati leh. ”
Hagayaasha ayaa loo oggol yahay inay ku kacaan waxyaabo gaar ah oo lagu qeexay Qaybta 23:
(a) Ka iibsashada ama ka iibsashada sheyga ceeriin ceeriin ka yimid beeroley, processor, ama soo saare gobolkaan;
(b) Haysashada, warshadeynta, diyaarinta, waxsoosaarka, istcimaalka, isku qasan, diyaarinta, ama xirmada xashiishadda dawooyinka;
(c) U wareejinta, rarida, keenida, ama iibinta xashiishadda dawooyinka iyo sahayda la xidhiidha ganacsiyada kale ee xashiishadda ee gobolkaan; ama
(d) Iibinta abuurka xashiishadda ama geedo udhaw hay'ado la mid ah oo shati u leh inay ku beeraan xashiishadda gobolkaan ama maamul kasta oo kale.
Sharciga ayaa dhigaya in ugu yaraan shan (5) hindise-bixiyeyaal lagu sharciyeeyo muddo hal sano gudaheed ah. Qodayaashu waxay ku xiran yihiin isla canshuur dhaafka 12% canshuur dhaafka sida kuwa beeralayda ah.
XARUNTA MACLUUMAADKA KENTUCKY CANNABIS
Sharciga ayaa abuuraya ruqsad siinta "soosaarayaasha", kuwaas oo aasaasi u ah beeralayda iyo soosaarayaasha. Gaar ahaan, waxaa lagu qeexay Qeybta 1aad sida:
“Soo-saare” macnaheedu waa hay'ad ruqsad u leh cutubkan oo loo oggol yahay inuu 17 ka hawlgalo ugana hawlgalo howlaha la oggol yahay ee abuuraha iyo 18 processor.
Sida ku xusan qaybta 24, soosaarayaasha ayaa loo oggol yahay:
(a) Helitaanka, haysashada, wax beero, beero, korinta, goynta, jaridda, ama keydinta abuurka geedka cannabis, geedo, dhir, ama walxaha dhirta ceeriin ah;
(b) Gaarsiinta, qaadista, wareejinta, keenista, ama iibinta sheyga ceeriin ceeriin ah, alaabada dawooyinka cannabis, ama sahayda laxiriirta ganacsiyada kale ee ruqsada u leh xashiishadda gobolkaan;
(c) U iibinta abuurka xashiishadda ama geedo u dhaxaysa hay'adaha la midka ah ee shatiga u leh inay ku beero xashiishadda gobolkaan ama maamul kasta oo kale;
(d) Ka iibsashada ama ka iibsato wax dhir ceeriin ah beeraleyda gobolkaan; ama
(e) Haysashada, warshadeynta, diyaarinta, waxsoosaarka, istcimaalashada, isku qasan, diyaarinta, ama xirmada xashiishadda daawada;
Hal sano gudaheed oo biilka dhaqangelintiisa ah, gobolka waa inuu soo saaraa ugu yaraan saddex (3) shati soosaare. Soosaarayaashu sidoo kale waxay ku qasban yihiin cashuurta xad dhaafka ah.
SHARCIGA LACAG LA'AANTA EE KU-DHAQANKA AMNIGA KENTUCKY MARIJUANA
Xarunta Xakameynta Badbaadada Xashiishadda ee sharcigu ogolyahay waxay qabataa mid ka mid ah laba adeeg
(a) Tijaabinta xashiishadda dawooyinka ee ay soo saartay ganacsiga xashiishadda ee ruqsad ka haysta cutubkan; ama
(b) Tababbarka kaararka iyo wakiillada ganacsiga xashiishadda;
Hawlaha soo socda waxaa loo ogol yahay sida hoos timaada Qeybta 25:
(1) Helitaanka ama haysashada xashiishadda dawooyinka ee laga helo kaar-wadeyaasha ama 26 ganacsiyada xashiishadda ee gobolkaan;
(2) Ku soo celinta daroogada cannabis daawooyinka kaararka ama ganacsiyada xashiishadda ee gobolkaan;
(3) Gaadiidka xashiishadda dawooyinka ee ay soo saartay ganacsiyada xashiishadda ee gobolkaan;
(4) Soosaaridda ama iibinta agab waxbarasho oo la oggolaaday oo la xiriira isticmaalka xashiishadda dawooyinka;
(5) Soosaarka, iibinta, ama safarka qalabka ama alaabada aan ka aheyn xashiishadda dawooyinka, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn sheybaarka shaybaarka iyo alaabada baakooyinka ay adeegsadaan ganacsiyada cannabis iyo kaar-wadeyaasha, mulkiilayaasha kaararka ama ganacsiyada xashiishadda ee shatiga u ah cutubkan;
(6) Tijaabinta xashiishadda dawooyinka ee laga soo saaray gobolkaan, oo ay ku jiraan tijaabinta waxyaabaha ku jira cannabinoid, sunta cayayaanka, caarada, faddaraynta, fiitamiin E acetate, iyo waxyaabaha kale ee la mamnuucay;
(7) Tababbarka kaararka iyo wakiillada ganacsiga xashiishadda. Tababarku wuxuu ku jiri karaa laakiin uma baahna in lagu xadido:
(a) Beerista badbaadada iyo hufnaanta leh, goosashada, baakaynta, calaamadaynta, iyo qaybinta xashiishadda dawooyinka;
(b) Amniga iyo hanaanka la xisaabtanka alaabada; iyo
(c) Natiijooyinka cilmi-baarista iyo cilmi-baarista ee ugu casrisan ee la xiriirta isticmaalka daawada xashiishadda.
(8) Qaadashada magdhawga ficilada loo oggol yahay sida hoos timaada qaybtan; iyo
(9) Ku lug yeelashada waxqabadyo ganacsi oo kasta oo daroogada cannabis aan si kale u mamnuucin ama xaddidin sharciga gobolka.
Si ka duwan rukhsadaha kale, gobolka looma baahna inuu soo saaro tirada ugu yar ee shatiyada xarunta ilaalinta xanaaneynta cannabis.
Waxaa jira qodobo kale oo muhiim ah oo ku jira biilka kuwaas oo si weyn saameyn ugu yeelan doona suuqa xashiishadda caafimaadka ee Kentucky:
Soo-saare ruqsad leh ayaa kaliya shaqeyn kara hal (1) beeritaan iyo hal (1) xarun wax lagu farsameeyo, in kasta oo laga yaabo inay joogaan meelo kala duwan;
Lacagta dib u cusboonaysiinta shatiga ayaa ku saleysan boqolkiiba inta rasiidhada guud:
Haddii rasiidhada guud ay ka yar yihiin $ 2,000,000, khidmaddu waa 1% rasiidhada guud + $ 500;
Haddii rasiidhada guud ay u dhexeyso $ 2,000,000 ilaa $ 8,000,000, khidmadda waa 1.5% rasiidhada guud + $ 2,000;
Haddii rasiidhada guud ay ka badan yihiin $ 8,000,000, khidmadda waa 2% rasiidhada guud + $ 4,000.
Hadday ka yar tahay $ 2,000,000 rasiidhada guud sanadkii la soo dhaafay, khidmaddu waa $ 500 oo lagu daray 1% rasiidhada guud;
Wasaaraddu way diidi kartaa laysanka loogu talagalay sabab kasta ha noqotee "Layli caqli wanaagsan", oo ay ku jiraan:
Sarkaal sare ayaa lagu xukumay dembiyo culus oo cayiman;
Xaruntu uma hoggaansanaanta mamnuucyada maxalliga ah;
Xaruntu ma qanciso amniga, kormeerka, ama diiwaangelinta xeerarka ilaalinta.
KA BADBAADO MUSTAQBALKA SHARCIYADA KENTUCKY MARIJUANA
Hindise-sharciyeedku wuxuu is-beddeli doonaa maaddaama ay ku shaqeyneyso dariiqa sharci-dejinta ee Frankfort. Si kastaba ha noqotee, sida ay hadda u taagan tahay, HB 136 wuxuu umuuqdaa mid la mid ah nidaamyada caafimaad ee gobolada kale. Caaggu wuxuu runtii ku dhufan doonaa wadada marka gobolka uu soo saaro qawaaniin ku saabsan nidaamka codsiga buuxa. Kentucky wuxuu u muuqdaa inuu si wanaagsan ugu diyaar garoobay inuu ku biiro gobolada kale ee badan oo ugu dambeyntii qaatay qabta faa'iidooyinka caafimaad ee xashiishadda.
Xeerarka Marijuana Medical Kentucky
Sharciga Xashiishadda Caafimaadka ee Kentucky
Ujeeddooyinka Qeybaha 1 illaa 30 ee qaanuunkan, haddii aan macnaha guud loo baahnayn:
6 (1) “Xiriirka bukaanka bukaanka / bukaanka Bona fide” waxaa loola jeedaa daaweyn ama latalin
7 cilaaqaad, inta lagu gudajiro inta xirfadluhu socdo:
8 (a) Wuxuu dhammeystirey baaritaan horudhac qof ahaan iyo qiimeyn ah
9 taariikhda bukaanka iyo xaalada caafimaad ee hada;
10 (b) Wuxuu kala tashaday bukaanjiifka marka loo eego daaweynta suurta galka ah iyo
11 astaamaha lagu dawayn karo ee xashiishadda dawooyinka;
12 (c) Wuxuu kula taliyay bukaanka halista suurtagalka ah iyo dhibaatooyinka ka imaan kara
13 Isticmaalka xashiishadda dawooyinka oo ay ka mid yihiin is-dhexgalka suurtagalka ah ee u dhexeeya Sharciyeynta Xashiishadda Caafimaadka ee Kentucky
14 cannabis daawo iyo wixii dawo ama dawo ah ee bukaanku yahay
Qaadashada wakhtigaas; iyo
16 (d) Inuu dejiyay filasho isaga ama iyadu waxay bixin doontaa daryeel dabagal iyo
17 daaweynta bukaanka;
18 (2) "Ganacsiga xashiishadda" macnaheedu waa beeraley, qaybiyaha, processor, soosaare, ama a
19 xarunta u hoggaansanaanta amniga shatiyeysan ee cutubkan;
20 (3) “Wakiilka ganacsiga xashiishadda” waxaa loola jeedaa sarkaal sare, xubin guddiga, shaqaale,
21 iskaa wax u qabso, ama wakiilka ganacsiga xashiishadda;
22 (4) “Kaar haye” macnaheedu waa:
23 (a) Bukaano diiwaangashan oo diiwaangashan, daryeel bixiye loo qorsheeyay, ama soo booqday aqoon u leh
24 bukaan oo dalbaday, helay, oo haysta diiwaan sax ah
25 kaar aqoonsi oo ay soo saartay waaxdu sida ay u baahan tahay cutubkan; ama
26 (b) Bukaano aqoon u leh booqashada oo helay diiwaangelin sax ah
27 kaarka aqoonsiga, ama u dhigma, ee la bixiyay iyada oo la raacayo qaanuunka
XUQUUQDA AADANAHA 20 RS HB 136 / GA Bogga 2 ee 118 HB013610.100 - 366 - Sharciyeynta Xashiishka Caafimaadka ee Kentucky
1 Gobol kale, degmo, dhul, dowlad wadaag, lahaansho la'aan
2 Mareykanka, ama wadan uu aqoonsaday Mareykanka oo oggol
3 qof inuu u isticmaalo xashiishadda daweynta caafimaadka ujeeddooyinka dawada ee xukunka
4 soo saarista;
5 (5) “Koriyaha” macneheedu waa hay'ad shati kaaran cutubkan kaas oo beera, goosashada,
6 oo u geeya wax soo saarka geedo cayriin beeraley kale, qaybiyaha, processor,
7 soo-saare, ama xarun u hoggaansan nabadgelyada;
8 (6) “Wakiilka kobciye” waxaa loola jeedaa sarkaal sare, xubin guddiga, shaqaale,
9 tabaruc, ama wakiilka beeraley;
10 (7) “Waax” macnaheedu waa waaxda Caafimaadka Dadweynaha sida lagu aasaasay KRS
12 (8) “Daryeel bixiye loo qoondeeyay” waxaa loola jeedaa qof ka diiwaangashan sida
13 waax sida ay ubaahantahay cutubkan;
14 (9) "Baahin" macnaheedu waa hay'ad ruqsad uheysa cutubkan helaya,
15 haysto, gudbiya, wareejiyo, wareejiyo, iibiya, dirsado, ama dawooyin daawo siiya
16 xashiishad oo loogu talo galay dadka sita;
17 (10) “Wakiilka qareenka” waxaa loola jeedaa sarkaal sare, xubin ka tirsan guddiga, shaqaalaha,
18 iskaa wax u qabso ah, ama wakiil wakiil ah;
19 (11) "U fasaxida dambi culus" waxaa loola jeedaa:
20 (a) Dambiga culus ee lagu garto qofka inuu yahay xad gudbi gacan ka hadal
21 KRS 439.3401; ama
22 (b) Ku xadgudubka sharciga dawooyinka maandooriyaha ee gobolka ama federaaliga oo la kala saaray
23 Dembi culus oo ku jira xukunka halka qofka lagu xukumay, marka laga reebo:
24 1. Dambiga lagu xukumay, oo ay kujirto waqti tijaabin,
25 maxbuus, ama kormeer la sii daayay, ayaa la dhammeeyay shan (5) ama in ka badan
26 sano kahor; ama 27 2. Fal ah oo ka kooban anshax ahaan Qaybaha 1 illaa 30 ee tan
Xeerarka Xashiishadda Caafimaadka ee Kentucky - bogga xiga
1 Sharciga ayaa laga yaabaa inuu ka hortago in la xukumo, laakiin falka sidoo kale
2 wuxuu dhacay ka hor dhaqan galinta Qeybaha 1 ilaa 30 ee qaanuunkan ama wuxuu ahaa
3 waxaa dacweeyay hay'ad aan ahayn Dawlada Dhexe
5 (12) "Xir xidhan, xarun qufulan" macnaheedu waa meel banaan oo gudaha ah sida qol,
6 aqalka dhirta lagu koriyo, dhisme, ama meel kale oo gudaha kuxiran oo la ilaaliyo iyo
7 waxaa ka shaqeeya beeroley ama soo-saare waxaana ku qalabeysan qufullo iyo amni kale
8 aaladaha u oggolaanaya marin u hel keliya wakiilo ka socda beeraleyda ama soosaaraha, sida
9 wasaaradu u baahan tahay;
10 (13) “Rasiidhada guud” waxaa loola jeedaa dhammaan lacagaha lagu helay, dhibcaha, hantida ama wixii kale
11 lacag ayaa qiimo u leh nooc kasta, ganacsi xashiishad ah;
12 (14) “Aagga koritaanka” waxaa loola jeedaa isku mid xidhan iyo meel xiran;
13 (15) “Marijuana” macnaheedu waa isku mid sida lagu qeexay KRS 218A.010;
14 (16) “Xashiishadda dawada” macnaheedu waa xashiishad sida lagu qeexay KRS 218A.010 goorma
15 beero, goostay, warshadaystay, soo saaray, safriyay, qaybiyay, qaybiyay,
Iibin, haystay, ama loo adeegsaday si waafaqsan Qodobbada 16 illaa 1 ee qaanuunkan. Ereyga
17 "xashiishadda dawada" waxaa ka mid ah dawooyinka cannabis daawooyinka iyo warshadda ceeriin 18 ah;
19 (17) “Agabyada dawooyinka cannabis” macnaheedu waa qalab kasta, alaabo, ama alaabo
20 nooc kasta oo loo isticmaalo, loogu talagalay in la isticmaalo, ama loogu talagalay in loogu isticmaalo diyaarinta,
21 kaydinta, isticmaalka, ama cunista xashiishadda dawooyinka si waafaqsan Qaybta 1
22 illaa 30 ee xeerkan;
23 (18) _ ”Shayga xashiishadda dawada” macnaheedu waa xarun kasta, wax soo saar, milix,
24 soo saarid, isku-darka, ama diyaarinta qayb kasta oo ka mid ah geedka Cannabis sp., Abuurkeeda
25 ama xuubka jirkiisa; ama xarun kasta, isku-dar, ama diyaarin ay ku jiraan wax kasta
26 tirada walxahaan markii la beero, goosanayo, la warshadeeyo, la soo saaro,
27 qaadis, fidin, qaybis, iibin, lahaansho, ama loo adeegsaday si waafaqsan
XUQUUQDA AADANAHA 20 RS HB 136 / GA Bogga 4 ee 118 HB013610.100 - Sharciyeynta Xashiishadda Caafimaadka ee Kentucky
1 Cutubyada 1 ilaa 30 ee xeerkan;
2 (19) “Yar” micnaheedu waa qof da'diisu ka yar tahay sideed iyo toban (18) sano;
3 (20) “Farmasiiste” macnaheedu waa isku mid sida KRS 315.010;
4 (21) “Dhaqan-yaqaan” macnaheedu waa dhakhtar loo oggol yahay inuu qoro la xakameeyay
5 walxood oo hoos yimaada KRS 320.240, ama kalkaaliye caafimaad oo horumarsan oo diiwaangashan
6 loo oggolaaday inuu qoro maandooriyaha la xakameynayo ee hoos yimaada KRS 314.042, kaasoo ah
7 ay u fasaxan yihiin guddiga shatiga gobolka si ay u bixiyaan caddeyn qoraal ah sida ku xusan
8 Qaybta 5aad ee Sharcigaan; 9 (22) “Processor” waxaa loola jeedaa hay'ad shati u leh cutubkan oo helaya warshad ceeriin ah
10 shey oo ka socda beeraleyda si loogu diyaariyo, loo gooyo, loo maareeyo, loo qaso,
11 soosaar, ama haddii kale wax ka beddel sheyga dhirta ceeriin, iyo waxyaabaha xirmada
12 ka kooban ama ka soo baxay wax warshadda ceyriinka ee iibka ah ee laga iibiyo ruqsad
13 qaybis; 14 (23) “Wakiilka mashiinka” waxaa loola jeedaa sarkaal sare, xubin guddiga, shaqaalaha,
15 iskaa wax u qabso ah, ama wakiil wakiil ah;
16 (24) “Soo-saare” waxaa loola jeedaa hay'ad shati u leh cutubkan oo loo oggol yahay
Waxay u hawl galaan sidii iyagoo ku hawlan waxqabadyada loo oggol yahay inuu abuuraha abuurka iyo
18 processor; 19 (25) “Wakiilka Soosaarahu” waxaa loola jeedaa sarkaal sare, xubin guddiga ah, shaqaale, tabaruc ah,
20 ama wakiil wakiil soo saare;
21 (26) “Bukaan karti leh” waxaa loola jeedaa qofka ka helay caddeyn qoraal ah
22 xirfadle kaas oo isagu ama iyadu ay leeyihiin xiriir xirfad-yaqaan ah oo aan wanaagsaneyn 23 xiriir;
24 (27) “Xaaladda caafimaad ee uqalma” waxaa loola jeedaa cudur ama xaalad caafimaad
25 wuxuu ka muuqdaa liiska shuruudaha caafimaad ee uqalmitaanka xirfadlaha
26 siiso bukaanka shahaado qoraal ah oo ay wasaaraddu oggolaatay
27 iyadoo la raacayo Qeybta 3aad iyo 28aad ee xeerkan iyo si waafaqsan maamulka
XUQUUQDA AADAN 20 RS HB 136 / GA Bogga 5 ee 118 HB013610.100 - 366 - XXXX GA
1 qawaaniin baa fidiyay;
2 (28) “Waxyaabaha geedka ceyriin” waxaa loola jeedaa qeyb ka mid ah dhirta dheddigga daboolan
3 Xashiish sp. ama isku dar kasta oo caleemo ruxan, jirridaha, miraha, iyo ubaxyada
4 Xashiish sp. warshad; 5 (29) “Kaarka aqoonsiga diiwaangelinta” waxaa loola jeedaa dukumiinti ay soo saartay waaxda taas
6 waxay qofka u aqoonsataa inuu yahay bukaan aqoon leh, soo booqday bukaan aqoon u leh, ama loogu talagalay
7 daryeele; 8 (30) “Bukaano diiwaangashan oo diiwaangashan” macnaheedu waa bukaan aqoon u leh oo codsaday,
9 helay, oo haysta kaar aqoonsi oo sax ah ama ku meel gaadh ah
10 rukhsad rukhsad oo ay soo saartay waaxda;
11 (31) “Xarunta u hoggaansanaanta amniga” waxaa loola jeedaa hay'ad shatiyeysan oo hoos timaada cutubkan
12 waxay bixisaa ugu yaraan hal (1) adeegyadan soo socda:
13 (a) Tijaabinta xashiishadda dawooyinka ee ay soo saartay ganacsiga xashiishadda ee ruqsad ka haysta
14 cutubkan; ama 15 (b) Kuwa sita kaararka tababarayaasha iyo wakiilada ganacsiga xashiishadda;
16 (32) “Wakiilka xarunta u hogaansanaanta amniga” waxaa loola jeedaa sarkaal sare, xubin guddiga,
17 shaqaale, tabaruc, ama wakiilka xarunta u hoggaansan badbaadada;
18 (33) “Seedling” macnaheedu waa geedka cannabis oo aan ubax lahayn oo ka dheer siddeed
19 (8) inji 20 (34) “Sigaar-cabida” macnaheedu waa neefsashada qiiqa oo ka dhashay gubashada cayriin
21 sheyga dhirta markii uu gubto olol; 22 (35) "Gudiga shatiga gobolka" waxaa loola jeedaa mid ka mid ah waxyaabaha soo socda:
23 (a) Golaha Shatiga Ruqsadda Kentucky; iyo 24 (b) Guddiga Kalkaalinta Kentucky;
25 (36) “Isticmaalka xashiishadda dawada” ama “dawaynta xashiishadda cannabis” waxaa ka mid ah
26 qaadashada, maamulka, haysashada, wareejinta, gaadiidka, ama isticmaalka
27 ka mid ah xashiishadda dawooyinka ama xashiishadda dawooyinka cannabis ee kaarka haysta
XUQUUQDA AADAN 20 RS HB 136 / GA Bogga 6 ee 118 HB013610.100 - 366 - XXXX GA
1 wuxuu waafaqsan yahay Qaybaha 1 ilaa 30 ee xeerkan. Erayada “isticmaalka daawada
2 xashiishadda cannabis ”iyo“ isticmaalka xashiishadda cannabis ”kuma jiraan:
3 (a) Soo saarista marijuanaane kaar haysta; ama 4 (b) Isticmaalka ama isticmaalka marijuanaanka sigaar cabbista;
5 (37) “Soo booqashada bukaanka aqoonta u leh” waxaa loola jeedaa qof sidaas oo kale iska diiwaangaliyay
6 waaxda sida loogu baahan yahay cutubkan ama yaa leh diiwaan sax ah
7 kaar aqoonsi, ama dukumenti u dhigma, oo lasiiyay sida ku xusan
8 sharciyada gobol kale, degmo, dhul, dowlad wadaag, lahaansho la'aan
9 Mareykanka, ama wadan ay aqoonsatay Mareykanka oo oggol qofka
10 in loo isticmaalo xashiishadda dawooyinka xaddiga soo saarista; iyo
11 (38) “Shahaadada qoraalka ah” waxaa loola jeedaa dukumenti taariikhaysan oo uu saxeexay xirfadle,
12 in: 13 (a) Ku xusan in fikrada xirfadleyda xirfadleyda uu bukaanku heli karo
14 ka-daweynta ama daweynta jir-dhiska isticmaalka xashiishadda daawada;
15 (b) Waxay tilmaamaysaa shuruudaha u qalmitaanka caafimaad ama shuruudaha ay
16 xirfad yaqaanku wuxuu aaminsan yahay in bukaanku heli karo daaweyn ama daaweyn
17 faa iido; iyo 18 (c) Xaqiijinaya in xirfad-yaqaanku leeyahay xirfad-laawe aan wanaagsanayn
19 xiriir lala yeesho bukaanka